Nagarik News - धोकेबाजका नाउँमा अन्तिम हरफहरू
धोकेबाजका नाउँमा अन्तिम हरफहरू
14 Jun 2013 | 10:39am
शुक्रबार ३१ जेष्ठ, २०७०
काठमाडौं - यो कुरा तिमीलाई कसरी भनूँ? अन्योलमा छु। तर, अब म यो कुरा तिमीलाई भन्न सक्छु किनभने गुमाउनका लागि मसँग अब केही पनि बाँकी छैन। मैले सर्वस्व गुमाइसकेँ। तिमीले यो चिठी पढ्दा मैले संसार छोडिसकेकी हुनेछु, अथवा छोड्ने क्रममा हुनेछु।
तिम्रो जिन्दगी भन्नु नै पार्टी र केटीहरू थिए। मेरो जिन्दगी चाहिँ तिमी र काम थिए। यस दुनियाँमा रहेँ भने म तिमीप्रति आशक्त हुनेछु र तिम्रो यादले सताइनेछु। त्यसैले म आफ्नो १० वर्षको करिअर र सपनाहरूबाट बिदा लिँदै छु।
भित्र–भित्र भत्किसकेकी छु म। तिमीलाई थाहा नहुन सक्छ तर तिमीले मलाई त्यो तहसम्म प्रभावित गर्यौ् कि मैले आफूलाई बिर्सेर तिमीलाई माया गरेँ। त्यसको बदला हरेक दिन तिमीले मलाई यातना दियौ। अचेल म कतै उज्यालो देख्दिनँ। हरेक बिहान ब्युँझन नचाहेर ब्युँझन्छु म।
कुनै बेला मैले तिमीसँग आफ्नो जिन्दगी देखेकी थिएँ, भविष्य देखेकी थिएँ। तर, तिमीले मेरा सपना चकनाचूर पारिदियौ। म भित्र–भित्र मरिसकेकी छु। मैले कसैलाई यति धेरै माया गरेकी थिइनँ। यति धेरै कसैको पर्वाह गरेकी थिइनँ। तिमीले मेरो प्रेमको जबाफ धोका र झुटले दियौ। मैले जति उपहार दिए पनि, तिम्रै खातिर जति सुन्दर देखिए पनि, त्यसले तिम्रा लागि कुनै अर्थ राख्दैनथ्यो। गर्भवती हुन्छु कि भनेर अत्तालिएकी थिएँ म, तर तिमीप्रति पूर्णतः समर्पित भएँ। हरेक दिन तिमीले दिने पीडाले मेरा एक–एक अंशलाई तहसनहस पार्योते, मेरो आत्मा नै ध्वस्त गरिदियो। म खान सक्दिनँ, निदाउन सक्दिनँ, सोच्न सक्दिनँ, काम गर्न सक्दिनँ। म हरेक चिजबाट भागिरहेकी छु। करिअरले पनि अब मेरा लागि कुनै महŒव राख्दैन।
तिमीलाई पहिलोचोटि भेट्दा म उत्प्रेरित थिएँ, महŒवाकांक्षी थिएँ र थिएँ अनुशासित। त्यसपछि तिमीलाई माया गर्न थालेँ। म ठान्थेँ– प्रेमले मभित्रको उत्कृष्टतालाई बाहिर ल्याउनेछ। मलाई थाहा छैन, भाग्यले किन हाम्रो मिलन गरायो? मैले व्यहोरेका पीडा, बलात्कार, दुर्व्यवहार, यातना– म तिनका हकदार थिइनँ। तिमीमा मैले न प्रेम देखेँ, न कुनै प्रतिबद्धता। तिमीले मलाई मानसिक र शारीरिक हानि पुर्या उँछौ कि भनेर म सधैँ त्रस्त रहन्थेँ।
तिम्रो जिन्दगी भन्नु नै पार्टी र केटीहरू थिए। मेरो जिन्दगी चाहिँ तिमी र काम थिए। यस दुनियाँमा रहेँ भने म तिमीप्रति आशक्त हुनेछु र तिम्रो यादले सताइनेछु। त्यसैले म आफ्नो १० वर्षको करिअर र सपनाहरूबाट बिदा लिँदै छु। तिमीले मलाई धोका दिएको सन्देश कतैबाट पाए पनि मैले तिमीलाई कहिल्यै भनिनँ। मैले यसलाई बेवास्ता गर्ने र तिमीलाई विश्वास गर्ने निर्णय गरेँ। तिमीले मलाई लज्जित तुल्यायौ। म कहिल्यै अर्को पुरुषसँग बाहिर गइनँ। म बफादार प्रेमिका हुँ। मैले तिमीलाई जति दिएँ, कुनै महिलाले तिमीलाई त्यति दिनेछैनन्। मैलेजति माया तिमीलाई कसैले गर्नेछैन। यो कुरा म आफ्नो रगतले लेख्न सक्छु।
मेरो करिअर राम्रो हुँदै गएको थियो। तर, त्यसले के अर्थ राख्छ? जब तिमी जहिले पनि दिल टुटेको पीडाले रन्थनिन्छौ, जब माया गरेको मान्छेले तिमीलाई दुर्व्यवहार गर्न र कुटपिट गर्न चाहन्छ, वा धोका दिन्छ, वा घरबाट निकालिदिन्छ वा तिम्रो परिवारको अपमान गर्छ। तिमीले मेरो बहिनीलाई कहिल्यै भेटेनौ। म भने तिम्रो बहिनीलाई उपहार किनिदिन्थेँ। तिमीले मेरो आत्मालाई नै च्यातिदियौ। मैले सास फेर्नुको कुनै औचित्य छैन। म तिमीबाट केबल माया चाहन्थेँ। मैले तिम्रा लागि सबथोक गरेँ। हाम्रा लागि काम गरिरहेकी थिएँ म। तर, तिमी कहिल्यै मेरो साथी भएनौ, हिस्सेदार भएनौ।
मेरो भविष्य बर्बाद भयो। मबाट मेरा खुसीहरू खोसिए। मैले सदा तिम्रो भलो चाहेँ। तिम्रो उन्नतिका लागि आफूसँग भएको थोरै रकम लगानी गर्न तयार थिएँ म। तिमीले कहिल्यै मेरो प्रेमको कदर गरेनौ। मेरो मुखैमा लात्ती हान्यौ तिमीले। अब मसँग न आत्मविश्वास बाँकी छ, न आत्मसम्मान। मसँग जेजति प्रतिभा दियो, जेजति महŒवाकांक्षा थियो, सबै तिमीले लुट्यौ। तिमीले मेरो जिन्दगी ध्वस्त गरिदियौ। गहिरो चोट सहेर मैले गर्भपात गराएँ।
तिमीले मेरो क्रिसमस र जन्मदिवसको डिनर खल्लो तुल्याइदियौ। तर, तिम्रो जन्मदिवसलाई विशेष बनाउन मैले यथाशक्य प्रयत्न गरेँ। भ्यालेन्टाइन्स डेको दिन तिमी मबाट टाढा रह्यौ। एक वर्षपछि हाम्रो बिहेको कुरा छिन्ने प्रतिज्ञा गरेका थियौ तिमीले। तर, पार्टी, केटीहरू र स्वार्थबाहेक तिम्रा केही चाहना थिएनन्। तिमी र मेरो खुसी, बस् यति थिए मेरा चाहना। यी दुवैलाई तिमीले खोस्यौ।
यो संसारमा बाँच्नका लागि अब मसँग केही पनि छैन। मैले जसरी तिमीले पनि माया गरिदिएको भए...। मैले हाम्रो भविष्यको सपना देखेको थिएँ। हाम्रो सफलताको सपना देखेेको थिएँ। टुटेका सपना र खोक्रा प्रतिज्ञाका साथ म यो संसार छोड्दै छु। बस्, अब कहिल्यै नब्युँझनेगरी निदाउन चाहन्छु म। तिमीसँग हुँदा पनि म आफूलाई नितान्त एक्लो ठान्थेँ। तिमीले मलाई एक्लो र कमजोर बनाइदियौ। म योभन्दा धेरै थोक हुँ।
« श्रीलंकामा ५० वर्ष पुरानो मुम्बई! भारतीय अभिनेता राहुल काठमाडौंमा »
जियाको श्रद्धाञ्जली सभामा बलिउड स्टार
जिया आत्महत्या : प्रेम टुट्यो, जीवन छुट्यो
बलिउड हिरोइन जिया खानले आत्महत्या गरिन्
ढकाल र नेपाललाई राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार
विराटनगर– प्रतिभा पुरस्कार प्रतिष्ठान विराटनगरले २०७२ सालको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कवि विप्लव ढकाल र कथाकार रत्नमणि...
विराटको घरमा अनुष्का
मुम्बइ-पछिल्लो साता बलिउडका 'लभ बर्डस' अनुष्का शर्मा र भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली मुम्बई एयरपोर्टमा गाडीभित्र केही...
असनको गल्लीमा खिचिँदै 'जात्रा'
काठमाडौं –मानिसको जीवनमा घट्ने दुःख सुखमाथि केन्द्रित गरेर निर्देशक प्रदीप भट्टराईले फिल्म 'जात्रा निर्देशन गर्ने भएका...
सामाजिक विकृतिमा आधारित 'ओ माई म्यान'
काठमाडौँ-आधुनिकता र यसले निम्त्याएको सामाजिक विसङ्गतिलाई छोटो चलचित्र 'ओ माई म्यान'ले पस्कने कोसिस गरेको छ। पुनम...